I-Clicky Web Analytics iyakwenza futhi! | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 21, 2007 NgoMgqibelo, July 21, 2007 Douglas Karr
I-Clicky Web Analytics ukhiphe enye into enhle!
Le yiwebhu analytics package eshesha iba yiphakethe elihle kunawo wonke engiwabonile - ikakhulukazi ama-blogger nabashicileli bewebhu. Ideshibhodi yake yaba nemethrikhi ebucayi esetshenziswayo - konke kusuka ekhasini elilodwa.
Nayi ideshibhodi entsha:
Jul 21, 2007 ngo-9: 17 PM
ubulokhu ulandela ukuphawula kwebhulogi labo ngakho Doug? .. abanye abajabuli ngakho konke… kwenzelwe abanye ukujabulisa uMgqibelo ntambama befunda i-LOL
Jul 21, 2007 ngo-9: 31 PM
Ngine, Steve. Angithukile nokho. Njengomphathi womkhiqizo, ngibona lokhu kuphendula njalo lapho 'sithuthukisa' umkhiqizo noma sikhipha isici esisha. Iqiniso liwukuthi, abantu abaluthandi ushintsho. Noma kuqhubeka.
Nayi inothi elithandekayo: ushintsho alususanga iyiphi ukusebenza! Imane ingeze okuningi!
Jul 23, 2007 ngo-3: 18 PM
Ngiqale ukusebenzisa uClicky emasontweni adlule, futhi ngijabule kakhulu ngakho!
Kungcono kakhulu kune-Google Analytics 🙂
I-Oct 24, i-2007 ku-12: i-47 PM
Ngabe kukhona omunye umuntu obonile ukuthi idatha ehlukile ibuyiswa yi-Clicky vs. Google Analytics ngokuhlola okuhlangene? Sinewebhusayithi yeklayenti lapho i-Clicky isanda kufakwa khona futhi ibonisa idatha ehluke kakhulu kune-Google. Isibonelo, ngosuku olulodwa iGoogle ikhombise izivakashi ezihlukile eziyi-18, kanti uClicky wakhombisa ama-48 ngosuku olufanayo, futhi lokhu akuyona into yesikhathi esisodwa. Njengoba kungenzeka kakhulu ukuthi iphakethe elilodwa le-analytics lingabiki idatha kunokuthi elinye lizodala idatha yokufakelwa, kufanele ngicabange ukuthi uClicky unedatha eyiyo kepha angikwazi ukuthola ukuthi kungani umehluko ukhona.
Okthoba 25, 2007 ngo-11: 03 AM
UJosh, kuthiwani ngezinye izinombolo, njengokuvakasha nezenzo, ingabe lezo ziyafana? Izivakashi zethu ezihlukile zibalwa ngekheli le-IP njengamanje. Ngenkathi kungenzeka ukuthi kwenziwe kunembe ngokwengeziwe ngamakhukhi nokuthi yini kungenjalo, njengoba ezinye izinhlelo zokusebenza zenza, ayikho indlela eqinisekile yomlilo yokuyithola ilungile ngo-100%. (Abanye abasebenzisi bakhubaza amakhukhi, njll).
Ngiyakholelwa kwikhwalithi yomkhiqizo wami, kepha uma kukhona engingakubheja ukuthi izinombolo zeGoogle zinembe kakhulu kunezethu. Banamashumi ezinkulungwane zamaseva asebenzisa ama-Analytics, asatshalaliswa kuwo wonke umhlaba. Ngenkathi siyinkampani encane enamaseva angaba ngu-10, konke kusendaweni eyodwa e-US. Kunzima ukuncintisana nalokho, ngaphandle kwezigidigidi ebhange.